ရွှေစိုးဟန်က Shwe Soe Han | PanSuriya Art Post
Pamaa, art video at Pansodan Scene
Open History Project: exploring local memory through the lens
bagi aung soe
ein aye kyaw
khin mg yin
kin mg yin
myint san myint
myo nyunt khin
pangyi aung soe
sit moe aung
ရွှေစိုးဟန်က Shwe Soe Han
11 November 2011, 05:13 Filed under: art and ideas | Tags: မောင်သာလင်း, ရွှေစိုးဟန်, maung tha lin, shwe soe han, shwesoehan
See Shwe Soe Han’s images here. English version of this post coming in December; there are more posts in English (andabit in Burmese) below.
This is in Unicode; if it is not displaying correctly, downloadaUnicode font. ForaMac OS 10.7 that should be enough. For pre-2012 Windows and pre-10.7 Macs you may need to download at add-on to your Chrome or Firefox such as Parallel Universe.
“နှစ်တစ်ရာ (ရာစုတစ်ခေတ်) အတွင်းမှာ အာလုံးဟာခေတ်ပြိုင်တွေ​ချည်းဖြစ်တယ်”
အဲဒီစကားကို ကွယ်လွန်သူ ဆရာကြည်အောင်က ပြောခဲ့တယ်။
အဲသလိုဆို….​ဆရာဒဂုန်​တာရာကနေ…​ကိုမိုဃ်းဇော်…​ကိုကြည်မောင်သန်းတို့လို မော်ဒန်​လူငယ်တွေထိ အားလုံးဟာ​ခေတ်ပြိုင်ပဲပေါ့… သဘော​တူရဲ့လား…​လက်ခံနိုင်ရဲ့လား… မောင်လေးအောင်လည်း​ခေတ်​မကုန်သေးဘူး။ မောင်သင်းခိုင်​လည်း ခေတ်မကုန်​သေးဘူး။ အောင်ချိမ့်လည်း ခေတ်မကုန်​သေးဘူး.. ဖေါ်ဝေးလည်းခေတ်မကုန်သေးဘူး။ မောင််ချောနွယ်လည်း ခေတ်မကုန်သေးဘူး အဲသလိုပြောရင်သဘောတူမှာလား ထခုန်ငြင်းမှာလား။ ကဗျာဆရာတွေဘယ်လောက်သဘောထားကြီးနိုင်သလဲ။
အဲဒါကိုတွေးမိတဲ့အခါ ပန်းချီဆရာ ဗဂျီအောင်စိုး​ပြောတဲ့​စကားကို​ပြေးသတိရမိတယ်။
“ရွှေစိုးဟန်က ရွှေစိုးဟန်ပါပဲ” တဲ့
ဆရာဗဂျီ​အောင်စိုးကို ” ဆရာနဲ့ ရွှေစိုးဟန်ဟာ ခေတ်ပြိုင်လား ” လို့သွား​မေးစရာ​မလိုပါ။ ဆရာဗဂျီအောင်စိုး​ကိုယ်တိုင်က-
ရွှေစိုးဟန်ဖြစ်လာမယ့်သူက ရွှေစိုးဟန်ဖြစ်လာမှာပါပဲ” အဲသလိုပြောခဲ့ဖူးတယ်။
ဆက်မပြောပေမယ့် ဆရာဗဂျီအောင်စိုးရဲ့စိ်တ်ထဲက ပြောလိုက်တဲ့ စကားကိုကျွန်တောကြားလိုက်ရသလို
ဟုတ်တယ် သူ့နှုတ်ဖျားက မပြောလိုက်ပေမယ့်သူ့မျက်နှာက အဲသလိုပြောတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ဒီစကားရဲ့ အရင်းအမြစ်ဟာ “အားလုံးခေတ်ပြိုင်ပါပဲ” လို့လက်ခံထားတဲ့ အဇ္စုတ္တမှာ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံတယ်။
မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ သရုပ်ဖော်ပုံတွေကို ကြည့်ရင် (လက်မှတ်ထိုးမထား နာမည်​ဖေါ်ပြမထားခဲ့ရင်တောင်) ဒါ ဗဂျီအောင်စိုးလက်ရာ… ဒါ စန်းလွင်…. ဒါ အုန်းလွင်…ဒါ ဘလုံလေး…​ဒါ ဦးဘကြည်…​ဒါ မြတ်ကျော်…ဒါ ပန်းချီ​မောင်ငွေထွန်း…​​ဒါ လှစိုး…..​ဒါ ကိုလေး…ဒါ သောင်းဟန်…ဒါ တင်လှဝင်း (ထင်)…ဒါ ကျော်သောင်း…. ဒါ စံတိုး၊ မောင်ဒီပြောနိုင်တယ်။ လိုင်းကို​မြင်တာနဲ့ သူတို့စတိုင်ဟန်ကိုပါသိပြီးသား အဲသလိုပါပဲ ကျော်ဖြူစံ၊ မုတ်သုန်၊ တဂိုးမျိုး၊ ဖေညွှန့်ဝေ၊ ရွှေစိုးဟန် မြင်ရုံနဲ့သိတယ်။ သူတို့မူ သူတို့ဟန်က ရှိပြီးသားပေါ်လွင်ပြီးသား ‘ ခေတ်ပြိုင် ‘ လို့ပြောနိုင်တဲ့ရင်ခုန်သံချင်းတူညီနေတာမို့ မတူတာက လက်ရာ ကိုယ့်လက်ရာ​ကိုယ့်​အနုပညာနဲ့ ခေတ်ပြိုင်​ကာလကို​ထင်ဟပ်နေပြီးသား။
၁၉၈၂ နောက်ပိုင်းမှာ ဒိုင်ယာရီ ရေးလေ့ကို အကြောင်းမညီညွတ်လို့ စွန့်လွှတ်ခဲ့ပေမယ့် ဆရာဗဂျီအောင်စိုးရဲ့ ‘ ရွှေစိုးဟန်က ရွှေစိုးဟန်ပါပဲ ‘ ဆိုတဲ့စကားကို ရန်ကုန်မင်္ဂလာဒုံမှာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဘဝ​သောင်တင်​နေတုန်း​ကာလ (၁၉၈၃-၈၅) အတွင်း နေ့​တစ်နေ့မှာ ကြားခွင့်​ရခဲ့တာပါ။
မှတ်မှတ်​ရရ မြိုင်က ပန်းချီဆရာ ၀င်းမောင် (ခဝဲခြံမှာနေတုန်းကာလ ဝင်းမောင်မောင်) လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူ မင်္ဂလာဒုံနေရန်ကုန်ထဲဆင်းလာတဲ့ နေ့တစ်နေ့၊ ကန်တော်ကလေးမြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းထဲက ‘ သဘင် ‘ မဂ္ဂဇင်း​တိုက်ဆီ​အလာ အယ်ဒီတာ ကိုချစ်ဦးညို နဲ့အတူ ပန်းချီဆရာ တစ်သိုက်​ရှိနေနှင့်​တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဗဂျီအောင်စိုး ကိုဒီ ဖေညွန့်ဝေ သူတို့သုံးယောက်
နားလေးနေပြီဖြစ်တဲ့ဆရာဗဂျီအောင်စိုးကို ကိုဒီက နှုတ်နဲ့ စကားပြောတာ​မဟုတ်ဘဲ စာနဲ့ ရေးပြ စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့​ရောက်သွား​ခဲ့တာ ဆရာဗဂျီအောင်စိုးကတော့ နှုတ်နဲ့ပဲ စကားပြန်ပေးပါတယ်။
အဲသလို​မဟုတ်ပါဘူး ကိုဒီ့ကျေးဇူးလည်း ကျွန်တော့်မှာ ရှိပါတယ်။ ကိုဒီ့ဆီကလည်း ကျွန်တော်ယူရတာပါပဲ ”
“အဲသလို​မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော့အိမ်မှာနေခဲ့တာ​မှန်ပေမယ့် ရွှေစိုးဟန်က ရွှေစိုးဟန်ပါပဲ”
ကျွန်တော်နဲ့​တွေ့လို့ ရွှေစိုးဟန်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး
“ပြော့ပျောင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းနဲ့ ရိုးရာဟန်မပျက်စေဘဲ အညာ​ကျေးလက်​ရဲ့ ရနံ့၊ အသံနဲ့ ဟန်ကို ပန်းချီထဲမှာ စုပ်ယူပြီး ပရိတ်သတ်ရင်ထဲ ပို့ပေးနေတဲ့ ပန်းချီဆရာတွေ​ထဲက တစ်ယောက်​အပါအဝင်” လို့ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ မှတ်ချက်ချလိုက်မိတယ်။
အညာ​ကျေးတောက ဖုတ်ထောင်းထောင်းထ​နေတဲ့ ရွာလမ်းကြောင်းမှာ နွားအုပ်ကြီးကို ရွှေစိုးဟန်က​မောင်းထုတ်လိုက်တာ​လားကျောင်းနေတာလား မပြောတတ် ကျွန်တော့​ဆီပဲ နွားအုပ်ကြီးပြေးလာတော့သလိုလို
(အဲဒီ​တုန်းက လွတ်လွတ်​လပ်လပ် ပြောရဲတဲ့ လူငယ်တွေပီပီ “နွားမှာတော့ ရွှေစိုးဟန်အပိုင်ဆုံးပဲ” လို့တောင် ဘောင်စည်းမထားဘဲပြောခဲ့မိသေး)
ရန်ကုန်​ရောက်ပန်းချီရာ ဖြစ်လာပေမယ့် နှုတ်ခမ်းထူထူ ပွင့်ဟဟနဲ့ (ရွာလွမ်းလို့လားမသိ) ငေးငေါင်ငေါင်နေလေ့ရှိတဲ့ အညာသား​ရွှေစိုးဟန်ကို​လွမ်းဆွတ်​မြင်ယောင်ရင်း……။
(မောင်သာလင်းရဲ့ ကဗျာရေးသက် ၄၇ နှစ်ပြည့်နေ့နဲ့